Diinta-Aqoon Archives · Page 2 of 2 ·
Category Archives: Diinta-Aqoon Casharka 4 Cilmi Baarista (Research) Maxaa lagu qexaa cilmi Baaris?. August.19 (Jowhar) –Doorashada Mowduuca (Selecting a Topic) : Qaybtaan waxaan ugu talagnay in aan ka caawino ardayga sidii aad u dooran lahaa mowduuci uu wax ka qori lahaa. ...
Casharka 3 Cilmi Baarista (Research) Maxaa lagu qexaa cilmi Baaris?. Noocyada Cilmi Baarista: Qaybtaan waa qayb kale oo ka mid ah cashardii hore ee aan ku soo baranay nucyada cilmi baariseed ee jira. Cilmi baaris waliba waxa ay leedahay hadaf gaar ah oo lagu gaaro.
Qiso Cajiib ah Sheikh Siciid Raage oo La Kulmay Ninkii Gabadha noqday Qiso Cajiib Ah Sheikh Siciid Raage Oo La Kulmay Ninkii Gabadha Noqday.
Waxaad halkaan hoose ka dawata arinkaan la yaabka leh wax lagu tilmaamo anen jirin daawo Videogaan.
Casharka 2 Cilmi Baarista (Research) Maxaa lagu qexaa cilmi Baaris?. Cilmi baaristu way nuucyo badan tahay wayna kala duwantahay. Inta aan la bilaabin cilmi barista waxaa haboon in la is waydiiyo. ...
Casharka 1 Cilmi Baarista (Research) Maxaa lagu qexaa cilmi Baaris?. Agosto 1 (Jowhar)— Cilmi baaris waa eray farsameed loo isticmaalo tacliinta sare gaar ahaan jaamacadaha. Sida ka muuqato eragya, waa labo eray oo isu tagay CILMI iyo BAARIS.